सडकमा देखिने क्याट्स आई के हो ? यसले के काम गर्छ ? | Automotive News Nepal
सडकमा देखिने क्याट्स आई के हो ? यसले के काम गर्छ ? २२ असार, २०७७
सडकमा मार्किङ गर्नका लागि क्याट्स आईको प्रयोग गरिन्छ । सन् १९३३ मा बेलायतबाट यसको प्रयोग प्रारम्भ गरिएको थियो । अहिले संसारका धेरै देशमा यसको प्रयोग गरिन्छ । क्याट्स आइलाई सडक सुरक्षाको यन्त्रको रुपमा लिइन्छ । यसले सडकको लेन मार्किङ र डिभाइडरको काम गर्छ ।
उक्त यन्त्रलाई मेटलको हाउजिङमा बलियो सिसाभित्र दुईवटा रिफ्लेक्टर राखेर सडकमा गाडिन्छ । यसले दिनको समयमा लेन मार्किङ र रातको समयमा लाइट रिफ्लेक्ट गरी डिभाइडरको रुपमा समेत काम गर्छ । यसलाई संसारभर प्रयोग गरेको पाइन्छ । डिभाइडर राख्ने स्थान नभएको सा“घुरो सडकमा यो उपयुक्त समाधान बन्छ । अहिले काठमाडौंको विभिन्न स्थानका सडकमा समेत यसको प्रयोग गरिएको छ । पछिल्लो समयमा सोलार बत्ती जडित क्याट्स आई प्रयोग गर्ने प्रचलन समेत बढेको छ ।
बेलायतका पर्सी शाले क्याट्स आईको आविष्कार गरेका थिए । बिरालोको आँखा रातमा चम्किन्छन् । यो डिभाइस पनि रातमा चम्किने भएकाले यसको नाम पनि त्यसै अनुसार राखिएको हो । सन् १९३४ मा शाले यसको पेटेन्ट अधिकार प्राप्त गरे भने सन् १९३५ को मार्च १५ मा यसको उत्पादनका लागि कम्पनी नै स्थापना गरे ।
जेठ १७ गते देखि तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा आउने
तातोपानी– ‘गोरखा भूकम्प’ पछि खण्डहर बनेको तातोपानी नाकामा पुनः...
यी हुन् यूएमबाट सिंगापुर टुर प्याकेज पाउने समिर
काठमाडौ – समिर श्रेष्ठले सिंगापुरका लागि आकर्षक टुर प्याकेज प्राप्त गरेका छन् ।...
टेष्ट राइडको नाममा मोटरसाइकल नै चोरी
कुनै पनि ग्राहक मोटरसाइकल किन्न आउँदा अवस्था कस्तो छ भनेर ‘टेष्ट राइड&rsqu...